Police have barricaded routes to a shrine east of Zimbabwe's capital to block an annual pilgrimage by Anglicans to honour a Mozambique-born martyr.
The Zimbabwean government is being asked to release an activist detained after exposing human rights violations in the country’s Marange diamond fields.
State-sponsored violence and human rights abuses are still taking place in the diamond fields of eastern Zimbabwe said campaign group Global Witness yesterday.
Zimbabwe must act to protect hundreds of thousands of people left in substandard settlements five years after a programme of mass forced evictions, say human rights groups.
The World Student Christian Federation and its Zimbabwe Advocacy Office has expressed shock at recent attacks on trade union leaders by police and security forces in Zimbabwe.